तपाइ पनि छाकैपिच्छे एकै किसिमको खाना खानु हुन्छ ? स्वास्थ्यमा के हानी हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
मानिस स्वस्थ रहनको लागि बिभिन्न कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । हामी नेपालीको बानी नै छ कि बिहान् होस् या त साँझ, दैनिक एकै किसिमको खाना खाने । जबकी तपाईले जतिनै पौष्टिक तत्व भएका खाना खाएपनि त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ ।
धेरै नेपालीहरु दैनिक साँझ र बिहान समेत खानामा दाल, भात र तरकारीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, विभिन्न अध्ययनहरुले यसरी दैनिक एकै प्रकारको खाना नियमित खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो नभएको बताएका छन् ।
५. खाने बित्तिकै सुत्यो भने अनेक प्रकारका रोगहरु लाग्छन् । मोहीले पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउने भएकाले खाना खाएपछि मोही खानु उत्तम हुन्छ । खानेबित्तिकै ध्यान गर्न, व्यायाम गर्न, शरीरमा तेल लगाउन हुँदैन ।
Don't Miss it यस्ता भ्रम जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन्, जान्रुहाेस्
Up Next असफल हुने डर छ ? यसरी हटाउनुहाेस् असफल हुने डरलाइ